januar 2022 - NorSom News
Doorka soomaalida Norway ee doorashooyinka Soomaaliya: Gudoomiyaha maaliyada ee gudiga doorashada
Norsomnews - 30. januar 2022
Haweenay ku dhimatay dabeylaha xalay iyo shaley ka dhacayay dalalka woqooyiga Yurub
Garoomadda diyaarada Bergen iyo Stavanger oo dib loo furay, kadib saacado ay xirnaayeen.
Reer Oslo oo laga codsaday inay dhaqaaleystaan biyaha.
Norsomnews - 29. januar 2022
Degmooyinka Oslo oo xoojinayo amniga goobaha talaalka.
Trondheim: Tuugo xaday kaamiro daaran oo wali shaqeyneyso oo boolisku ay qabteen.
Norsomnews - 28. januar 2022
Oslo: Gacmo aan dhaqneyn ayay ku gurubsatay(uruursatay) mac-macaan= 12.500 kr ganaax ah ayaa lagu xukumi karaa.
Norway oo sheegtay in qoxootiga lagu celin karo Afganistaanta ay Taalibaan xooga ku qabsatay.
Norway: Dowlada oo taageeradii dhaqaale u diiday dariiqo diineed masiixi ah.
Norsomnews - 27. januar 2022
(Daawo) Wareysi. Dr/Xildhibaan Abdi Ali Hassan: Musharax reer Norway ah oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Norsomnews - 26. januar 2022
Dowlada: Hada kadib uma baahnid inaad gasho karantiil, laakiin waa inaad is baartaa
NorSom TV: Soomaalida Norway iyo dareentooda doorashada Soomaaliya.
Wasiiradda arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Norway oo wadahadlay.
U.K: Wasiiradd hore oo sheegtay inay xilkeeda ku weysay ‘Muslimnimo’.
Norsomnews - 25. januar 2022
Maxkamad: Ninkeedii ayay magaciisa deyn ku qaadatay, waxeyna isku deyday inay sun ku disho.
Daawo NorSom TV: Wararkii ugu muhiimsanaa ee Norway ka dhacay isbuucii lasoo dhaafay
Wareysi gaar ah:Doorka dhalinyaradda Norway iyo u adeegista bulshada- Ururka UM ee Stavanger
Norsomnews - 24. januar 2022
Norway: UDI-da oo sharcigii qoxootinimo sababtan awgeed uga ceshatay Ereteriyaan tiro badan.
Norsomnews - 23. januar 2022
Daawo: Breivik- Anigu masuul kama aheyn dadkii aan dilay, xabsiga hala iga sii daayo.
Tirada dhalmada oo kor u kacday sanadkii lasoo dhaafay
Norsomnews - 21. januar 2022